”NZ WAA KULA BAROORANAYSAA!” – RW NZ iyo kumannaan qof oo nooc kasta leh oo iskugu soo baxay hiillo u muujinta Muslimiinta + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”NZ WAA KULA BAROORANAYSAA!” – RW NZ iyo kumannaan qof oo nooc...
”NZ WAA KULA BAROORANAYSAA!” – RW NZ iyo kumannaan qof oo nooc kasta leh oo iskugu soo baxay hiillo u muujinta Muslimiinta + Sawirro
(Christchurch) 22 Maarso 2019 – Dadka New Zealand ayaa maanta hiillo ballaaran oo heer qaran ah u muujiyay Muslimiinta dalkaasi todobaad uun kaddib weerarkii bahalnimada ahaa ee ka dhacay laba masjid oo ku yaalla magaalada Christchurch oo uu nin argagixiso ihi 50 qofood ku laayay.
Boqollaal Muslim iyo kuwo aan Muslim ahayn ayaa iskugu yimid jardiinada Hagley Park oo kasoo horjeedda isla masjidka Al Noor, waxaana jirdiinada laga dhex taagey wax laga metelayo masjidkaasi jamaacada lagu laayay.
RW Jacinda Ardern, oo qamaar dahabi iyo madow ah xiran ayaa khudbad gaaban ka jeedisey isu soo baxan oo sidoo kale lagu oogey salaaddii Jimcaha, waxayna iyadoo qiiraysan tiri:
‘New Zealand way kula barooranaysaa. Waxaan nahay hal.’
Previous articleDAAWO: Barnaamij ka bixi jirey Fox News oo dadka lagu xagxagan jirey oo Ilhaan Cumar darteed loo joojiyay!!
Next articleQoraal lagu buufiyay masjid ay leeyihiin Soomaalida Minneapolis oo laga bixiyay fasiraad NAXDIN leh!